Kutaura kunonyanya pakati pezvikwata, ruzivo rwepfungwa, nekukudzwa kwetsika dzevanhu; asi mhedzisiro yekutaura kwose iri mu Breath. Kubva kupi kunobuda Breath uye kwairi kuenda kunogona kudzidziswa nekutevera mazano eDelphic Oracle: "Munhu Ziva Iwe pachako."
Vol. 1 JULY, 1905. Nha. 10
MHURI yemhuri yevanhu inofema kubva panguva yekupinda munyika ino chaiyo kusvikira nguva yekuenda kwavo, asi kwete kusvika kwekupedzisira kwezana remakore ekupedzisira ine bazi rekumadokero remhuri rakanyatsocherechedza kukosha kwekufema, uye kusvika pakufema. Kuchenjerera kwave kuchiendeswa kunyaya yacho, vakagamuchira nzira dzakakurudzirwa ne "vadzidzisi" uye vazhinji vakaenda vachifema. Vaporofesa vesayenzi yekufema vakaonekwa pakati pedu, avo, nokuda kwekufungisisa, vanodzidzisa vasina unyanzvi nzira yekuwana nayo uye kuti vangachengeta sei vasati vafa vasati vauye, vanosimuka mukutora, vanowana simba pamusoro pevanhu vose, vachitonga uye vanotungamirira simba rezvose, uye nzira yekuwana nayo upenyu husingaperi.
Isu tinofunga kuti kufema kufema kunogona kubatsira chete kana kuitwa pasi pemurayiridzo weavo vaine ruzivo rwechokwadi uye mushure mokunge pfungwa yemudzidzi yakanga yakadzidziswa uye yakagadzirirwa ivo nekudzidza kwefilosofi, nokuti iyo yaizodzidzisa zve maitiro uye unhu mumudzidzi sezvavanokurudzirwa nokufema, uye zvinomurega kuti atarame nematambudziko ekuvandudzwa kwepfungwa. Kubva kwakadzama kufema kwepanyama kwakanaka, asi, semugumisiro wekuita kufema kwemaitiro, vazhinji vakaderedza kushanda kwemwoyo uye vane mvumo yekutya, zvirwere zvakagadziriswa, -kazhinji zvinoshandiswa-zvinoshungurudzika uye zvinoshungurudza, zvakagadzirirwa kudya zvakashata uye mafungiro akawedzerwa, vane kusavhiringidza pfungwa dzavo, uye vakatopera mukuzviuraya.
Kune marudzi akasiyana-siyana ekufema. Ikoko kune Great Breath iyo inobhururuka uye inoyerera muchitinha chisingadi; kuburikidza nayo maitiro ezvisikwa zvose anofuridzirwa kubva kune zvisingaoneki kune maziso anooneka. Kubva kune imwe neimwe yeasingaverengeki mashizha ezuva anofema kunze kwehurongwa hwavo hwepasi; uye zvakare chimwe nechimwe chezvinhu izvi chinopfurikidza maitiro akawanda. Izvozvi maitiro anodzokororwazve ne inbreathing yenyika, maitiro anonyangarika mumagetsi avo ezuva, uye ose anoderera zvakare mu Great Breath.
Kuburikidza nemunhu, ndianiko ikopi yeizvi zvose, marudzi mazhinji emhepo inofema ari kutamba. Iro inowanzonzi kufuridzirwa kwemweya hakuna mweya, ndicho chiitiko chokufema. Sangano rokupema rinokonzerwa nemhepo yekufema iyo inowanzoonekwa kuvanhu nemhuka zvakafanana, iyi mweya inoita hupenyu muhupenyu. Kupisa hakusi nitrogen uye oksijeni, asi izvi zvinowanikwa nevamwe zvinoshandiswa nemhepo yekufema kunotsigira muviri nezvimwe zvokudya. Iyi mweya inoita zvikamu zvakawanda uye inoshandisa zvinangwa zvizhinji. Apo inopinda mumuviri pakuberekwa inobatanidza hupenyu huri mumuviri iwoyo uye gungwa rehupenyu umo pasi nemuviri womunhu uri kufamba. Kamwe kubatana kwave kwakagadzirwa uku kufema kunorondedzera hupenyu huno kunze uye mukati memuviri kusvika kune chimiro chemufomu, iyo inogadzira hupenyu hunopisa hwehupenyu mukugadzirwa nemuviri wemuviri. Kuita mudumbu uye chiropa ichi kufema kunoita kuti zvive nyore, zvido, uye zvido. Sezvo mhepo iri kutamba pamusoro pemaketani eeolian harp, saka mweya unofema unofamba pamusoro pemambure-basa remitsipa mumuviri, unoshungurudza pfungwa uye unotungamira iwo kune chinangwa chepfungwa dzakagadzikana, -sinei kuti haisi yega-kana kugara pamusoro uye kuita zvinodiwa zvinoratidzwa nemuviri.
Asi kufema kwechokwadi kwevanhu ndiko kufema mupfungwa uye kune imwe yakasiyana. Icho chinhu chinoshandiswa mukati memo pfungwa dzemuviri dzinoshanda nemuviri. Uku ndiko kufema kunobata pfungwa, ndiko kuti, pfungwa dzinogadzirwa nemafungiro. Iko pfungwa yekufema muviri kana kuti pfungwa yepfungwa yega, iyo mweya wekusingaperi wemunhu inoshandisa semotokari yayo yekuita kuti kuwirirane nemuviri wenyama pakuberekwa. Apo kufema uku kwapinda mumuviri pakuberekwa, kunosimbisa ukama huri pakati pomuviri wenyama uye ego kana "Ini ndiri" chirevo. Nenyika iyo inopinda munyika, inorarama munyika, inobva munyika, uye inopfuura kubva pakuzvarwa kusvika pakuzvarwa. Ego inoshanda uye inoshanda nemuviri kuburikidza nekufema uku. Chiito chenguva dzose nekugadzirisa pakati pemuviri nepfungwa zvinotungamirirwa nekufema uku. Pfungwa yekufema iri pasi pemhepo yekufema.
Panewo kufema kwemweya, iyo inofanira kudzora pfungwa nepfungwa yekufema. Kufuridzirwa kwemweya ishoko rekusika kuburikidza nekuda kwacho kuchizoshanda, kunodzora pfungwa, nekufananidza hupenyu hwevanhu kusvika kumagumo aMwari. Iyi kufema inotungamirirwa nehudo mukufambira mberi kwayo kuburikidza nemuviri umo inomutsa nzvimbo dzakasviba, inochenesa nhengo dzakasvibiswa nehupenyu hwehupenyu, dzinosimudzira zvinangwa, uye dzinoshandura muicho chaiyo mikana yaMwari inopera yevanhu.
Inonzwisisa zvose izvi kufema uye kuvatsigira ndeye Great Breath.
Nekufema kwemavortex-kufanana nemhepo iyo mweya, iyo pfungwa yekufema, inopindira uye inopoteredza muviri pakuberekwa nekutanga. Iyi mukova wefema ndiyo kutanga kwekuvakwa kwevanhu pachavo kuburikidza nehupenyu hwevanhu hwepanyika. Pane imwe nzvimbo yekufema mukati memuviri uye imwe nzvimbo iri kunze kwemuviri. Muhupenyu hwose kune marwadziro emvura uye inoyerera pakati pezvivako zviviri. Panguva yega yega yega inbreathing kune kuwirirana kunofanana kwepfungwa mupfungwa. Utano, hutsika, uye humwe hutano hunoenderana nekufambidzana kwekufema mukati mezvi nzvimbo. Kana mumwe munhu achida kufema nemumwe kunze kwesangano rinopindira, kutarisirwa kunofanira kutorwa kuti mhando uye nzira yekufemerwa yakagadziriswa inofanira kuvimba nemuviri wepanyama, mutsika, uye mumweya, mune zvaanoda uye zvido zvake. Kufema kunobva mukati nekunze kusvetuka kwependulum inobvisa hupenyu hwemuviri. Kufambisa kwefema mukati memakamuri maviri kunobata chikamu chehupenyu mumuviri. Kana ikakanganiswa neupenzi kana nechinangwa, hutano hwemuviri nemafungiro huchaora uye zvirwere kana rufu zvichaguma. Iko kufema kunowanzobuda kubva mumhino chaiyo kwemaawa maviri, zvino inoshanduka uye inoyerera pamwe chete nemhino mbiri pamwe chete kwemaminetsi mashomanana, uyezve kuburikidza nemhino yakasara kwemaawa maviri. Mushure mokunge inoputika pamwe chete kuburikidza nezvose, uye zvakare zvakare kuburikidza nemhino yakarurama. Kune vose vane utano hwakanaka izvi zvinopfuurira kubva pakuzvarwa kusvika pakufa.
Chimwe chinhu chinoshamisa chemhepo inenge isingazivikanwi ndeyekuti inopinda mukati uye inopoteredza munhu mumafungu ehurefu hwakasiyana, hunotsanangurwa nekufema kwezvisikwa, uye pamusoro poutano hwake hwepanyama, hutsika, uye hwemweya uye kubudirira.
Iye zvino tsika yekufema inosanganisira kuchinja kwekuzvidira kwekuyerera kubva kuruboshwe kuruboshwe kana kurudyi kune kurudyi kana kuruboshwe, sezvazvingave zviripo, kushanduka kwezvisikwa kusati kwasvika, kusabvumirana nekudzivirira kutenderera, uyewo mukushandura kureba kwenguva. Maererano nezvakave zvataurwa pamusoro pemhepo yekufema zvinofanira kuve pachena kuti kushamwaridzana kwepanyika kwevanhu pamwe nezvose kunogona kupindira nyore uye ukama hwake hukanganiswa. Nokudaro njodzi huru kune vasina zivo uye nekukurumidza vanotora kufema kupedza pasina chivimbo chekugadzirirwa, uye yekuve nemudzidzisi akakodzera.
Kufambisa kwefema kunobata muhutano hwakawanda mumuviri. Kuchengetwa kwehupenyu hwemhuka kunoda kupfuurira kunongedzera kwe okisijeni uye kugadzirwa kwecaricic acid. Nenzira inbreathing mhepo inokweverwa kumapapu ayo inosangana neropa, iyo inotora oxygen, inonatswa, uye inobudiswa kuburikidza nehutano hunoenda kumativi ese emuviri, kuvaka nekumwisa masero; ipapo nenzira yemaketani ropa rinodzoka rakapiwa carbonic acid uye ine chikamu chezvinhu zvinosvibisa uye nenyaya yakashata, iyo yose inodzingwa mumapapu nekudengenyeka. Saka hutano hwemuviri hunoenderana nekukwanira oksijeni yeropa. Pamusoro kana pasi pemhepo inokonzera oksijeni inokonzera chivakwa chemasero nekusvika kweropa risina kukwana muhupenyu hwavo, uye inobvumira zvirwere zvirwere kuti zviwedzere. Zvose zvirwere zvepanyama zvinokonzerwa nepamusoro kana pasi pehupenyu hwemhepo. Ropa ndiro rinokonzerwa nekufema, uye kufema kunoenderana nehutano hwekufunga, chiedza, mweya, uye zvokudya. Pfungwa dzakachena, chiedza chakawanda, mweya wakachena, uye zvokudya zvakachena, zvinokonzera kufema kwakanaka uye naizvozvo kukodzera oxygenation, saka hutano hwakakwana.
Mapapu uye ganda haisi ivo chete nzira dzinofemera munhu. Kufema kunouya uye kunoenda nhengo dzose mumuviri; asi zvinonzwisisika kuti kufema hakusi kwemuviri, asi kwepfungwa, mupfungwa, uye mumweya.
Mhepo inofema inomutsa mudumbu, chiropa, uye spleen; chido, kuda, uye zvido. Inopinda mumwoyo uye inopa simba kumanzwiro nemafungo; iyo inopinda mumusoro uye inotanga kufamba kwechimiro chemuviri wemweya mukati mehupi hwepfungwa, zvichivaunza muhukama nemapurisa akakwirira ekuve. Nokudaro kufema iyo pfungwa yekudzidzira inoshandurwa kuva mupfungwa yevanhu. Pfungwa ndeyekuti "Ndiri," asi "Ini ndiri" kutanga kwe nzira inotungamirira kune Uyo asingakundiki- Kuziva.